DEGMIA-Toamasina: hovitaina anatin’ny fito volana ny taom-pianarana 2019-2020 - ewa.mg
DEGMIA-Toamasina: hovitaina anatin’ny fito volana ny taom-pianarana 2019-2020
News - DEGMIA-Toamasina: hovitaina anatin’ny fito volana ny taom-pianarana 2019-2020
Taorian’ny fihaonana teo anivon’ny
Copries, nandraisana toromarika avy amin’ny minisitry ny
Fampianarana ambony ho amin’ny tetiandron’ny fampianarana ambony ho
an’ny taom-pianarana telo nifanesy, manao antso avo ny sojaben’ny
departemantan’ny Degmia, amin’ny onversiten’ i Barikadimy-
Toamasina, profesora Razanakolona Diny. Nambarany fa hitohy tahaka
ny isan’andro ny fampianarana ary efa hofaranana ihany koa ny
taom-pianarana 2018- 2019. Antsoina, araka izany, ireo mpianatra
rehetra hanatitra ny dikan’ny taratasim-panadinana “copie” any
aminy. Niantso ireo tokony hisoratra anarana, indrindra ireo
manomana sy “Licence” sy “Masters” ny tenany. Hifarana ny 30
septambra ho avy izao ny fandraisana ny
antontan-taratasim-panadianana, hivoaka aorian’izay ny vokatra
ary hikatona ny taom-pianarana 2018-2019. Hiditra ny 2 novambra ny
taom-pianarana 2019-2020, izay hovitaina anatin’ny fotoana fohy,
manodidina ny fito volana. Hirosoana aorian’ izay ny taom-pianarana
2020-2021. Ho an’ny sampam-piofanana toekarena, lalàna,
fitantanana, hisy ny fitsapam-pahaizana ho an ireo mpianatra
hiditra taona voalohany. Misokatra koa ny fampiofanana
ampitain-davitra ho an’ ireo efa miasa na tsy afaka hanatrika
fampiofanana an-dakilasy, na ireo monina ivelan’ i Toamasina. Afaka
misoratra anarana avokoa izy ireo ary hifarana ny 30 septambra
Ho an’ny fampiofanana arakasa, ho
an’ ireo telo taona taorian’ny nahazoana bakalorea teo amin’ny
lalampiofanana lalàna sy matematika, mifarana ny 30 septambra ho
avy izao ihany koa ny fisoratana anarana “master professionnel en
marchés publics”, izay mety hazahoana toerana maha talena
fitantanana na izay mitovy lenta aminy eny anivon’ny
sampandraharaham-panjakana. Toy izany ihany koa ny fampiofanana
fitantanana seranan-tsambo sy ny fampitaovana, efa
hisokatra manomboka ny 8 oktobra izao ny fisoratana
anarana. Ho an’ ireto farany, voalaza fa matotra ny fiaraha-miasa
eo amin’ny PRMP, Smmc ary efa vita ihany koa ny fifampiresahana
tamin’ny Spat. Hanampy ny Degmia eo amin’ny fiaraha-miasa
hanatsarana ny fampiofanana hahazoan’ny mpianatra Master izy
ireo.Tsy ho ela ny fivoahan’ny andiany eo amin’ny Master 2
anivon’ny departemanta Degmia.
L’article DEGMIA-Toamasina: hovitaina anatin’ny fito volana ny taom-pianarana 2019-2020 a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – «Can 2019»: notsenain’ny Alzerianina tamin’ny fomba makotroka ny Fennecs
Nakotroka ary tena tamin’ny fomba manetriketrika ny nandraisan’ny vahoaka alzerianina ny ekipan’ny Fennecs, taorian’ny nahazoan’izy ireo ny amboara amin’ny maha tompondakan’i Afrika azy, ny «Can 2019 », rehefa nandresy an’i Sénégal.Toy ny nandraisan’ny vahoaka malagasy ny Barean’i Madagasikara, ny asabotsy 13 jolay lasa teo, ny nitsenan’ny vahoaka alzerianina ireo mpilalaon’ny Fennecs, ny asabotsy 20 jolay. Vahoaka antapitrisany, niteraka fitohanana goavambe, nanomboka teny amin’ny seranam-piaramanidina ka hatreny amin’ny toerana efa voaomana nandraisana azy ireo. Horakoraka sy ranomasom-pifaliana ary dihy ny nanehoan’ny Alzerianina ny hafaliany, tamin’ny nahazoan’ny Fennecs fanindroany ny amboara.Raha tsiahivina, resin’ny Fennecs-n’i Alzeria, tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0, ny Lionan’i Teranga, avy any Sénégal. Fihaonana, notanterahina tao amin’ny kianja Cairo Stadium, ny zoma lasa teo. Baolina tokana, tafiditr’i Baghdad Bounedjah, teo amin’ny minitra faharoa nanombohan’ny fihaonana.Tsy mbola afa-bela indray izany tamin’ity ry Mané izay efa lavon’ny Fennecs, tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0 ihany koa, nandritra ny lalaom-bondrona, tamin’ity “Can 2019” ity. Tsy mbola tao amin-dry zareo Senegaley mihitsy ny vintana satria indroa tonga teo amin’ny famaranana ny Lionan’i Teranga, saingy indroa resy.Ankoatra izay, ilay Nizerianina, i Odion Ighalo, no voahosotra ho mpampidi-baolina be indrindra. Nahatafiditra baolina dimy izy, nandritra iny “Can 2019” iny. Teo amin’ny laharana faharoa ilay Senegaley, i Sadio Mané, sy ilay Alzerianina, i Riyad Mahrez, ary ilay Kongoley, Bakambu, samy nahafaty baolina telo avy. Ho an’ny Barean’i Madagasika indray, i Carolus no nahafaty baolina be indrindra, miisa roa. Tompondaka L’article Kitra – «Can 2019»: notsenain’ny Alzerianina tamin’ny fomba makotroka ny Fennecs a été récupéré chez Newsmada.
Tomban’ezaka zato andro :: Hanao tatitra ny Filohan’ny Repoblika
Tomban’ezaka voalohany. Hanao tatitra momba an’ ireo dingana vitany nandritra ny zato andro nitondrany an’i Madagasikara ny Filohan’ ny Repoblika, Rajoelina Andry, amin’ny alahady 28 avrily 2019 ho avy izao, etsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena, Mahamasina. Hibahan-toerana hatrany ny firosoana amin’ny fanatontosana an’ireo velirano nampanantenainy. Isan’ireo hanotrona ny hetsika eny an-toerana ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta. Raha tsy misy ny fiovana dia ho tonga eny Mahamasina ihany koa ireo mpikatroka politika mpiara-dia aminy. Hifanojo amin’ny fotoam-panombohana ny fampi- elezan-kevitra mikasika ny fitsapan-kevi-bahoaka rahateo io andro io. L’article Tomban’ezaka zato andro :: Hanao tatitra ny Filohan’ny Repoblika est apparu en premier sur AoRaha.
Ambohimangakely : Lehilahy tra-tehaka teo am-pangalarana fiara
Nahazo vahana indray tato ho ato izay ny fangalarana kojakojana fiara, eny fa na hatramina vatana fiara mihitsy aza. Toy ity nitranga tetsy Ambohimangakely ity, ny alakamisy vao maraina lasa teo. Raha teo am-paningana « capot », hanamarina ny fatran’ny menaka mantsy ny tompon’ny fiara no niditra an-tsokotsoko tao anaty fiara ny lehilahy iray. Efa teo am-pamelomana izany mihitsy ny anao lahy no taitra ny tompony ary niantso vonjy avy hatrany. Tamin’io fotoana io mihitsy ihany koa no nandalo ireo zandary misahana iny faritra iny, teo am-panaovana fisafoana. Nandray ny andraikiny avy hatrany ireto farany, niditra an-tsehatra niezaka nisambotra ilay mpangalatra fiara. Tafatsoaka anefa ity farany ary nihazo ny tanimbary. Raikitra teo ny fifanenjehana ka taty Ambatomaro vao tratra ity mpangalatra ity. Tamin’ny famotorana azy no nahafantarana fa nikasa ny hangalatra io fiara io mihitsy ny tenany ary nolazainy fa handeha hamidiny izany raha azony teo. Natolotra avy hatrany teny amin’ny Fampanoavana moa ity farany rehefa vita ny famotorana natao azy. Taorian’izay dia nampidirina am-ponja vonjimaika eny Antanimora ny lehilahy. m.LL’article Ambohimangakely : Lehilahy tra-tehaka teo am-pangalarana fiara a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Nitrangana hain-trano tany Mahavoky Atsimo Mahajanga, omaly maraina. May ny ankamaroan’ny entana tao amin’ny efitra telo nandalovan’ny afo. Tombanana ho tao amin’ ny efitra iray nihidy no niavian’ny firehetana voalohany. Voafehy ny loza noho ny fahatongavan’ny sampana mpamonjy voina tany an-toerana. L’article Hain-trano est apparu en premier sur AoRaha.
Natao sonia, omaly, ny fifanarahana fiaraha-miasa eo amin’ny Bianco sy ny Tahirimbola ho an’ny fampandrosoana (Fid), iadiana amin’ny kolikoly. Mandritra ny telo taona ny fifanarahana ka tanjona ny tsy handeferana mihitsy amin’ity fanetriben’ny firenena ity. Endrika iray hanamafisana ny fanjakana tsara tantana ihany koa, tafiditra ao anatin’ny fandaharanasan’ny Fid.Mampihena ny fitomboana toekarena ny kolikoly, izay efa mahazo vahana manerana ny sehatra maro eto Madagasikara. Izay ny nahatonga ity fiaraha-miasan’ny Fid sy ny Bianco ity, hampiroboroboana ny fitondrantena mendrika sy ny mangarahara. Nambaran’ny tale jeneraly vonjimaika ny Fid, Rajaoharilala Serge, fa “nampiharin’ny Fid, nanomboka ny taona 2014, ny fomba fitantanana ahitana soritra ny maha olom-pirenena ho an’ireo mpisehatra rehetra mba ho tena tompon’andraikitra, hanamafisana ny fanajana ny zon’ny tsirairay sy ny vahoaka eny ifotony, hanehoana ny mangarahara amin’ny fitantanana ny tetikasa rehetra ary koa hisian’ny tamberin’andraikitra any amin’ny vahoaka”.Vaomiera manokana hiady amin’ny kolikolyHanamarinana izany, hapetraka ao anivon’ny rantsa-mangaikan’ny Fid, manomboka izao, ny vaomiera miady amin’ny kolikoly (CAC), hanentana ny mpiasa sy ny mpiara-miombon’antoka samihafa, hisian’ny mangarahara, miaraka amin’ny drafitrasa hanatanterahana azy.Ho an’ny tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean Louis, “raharaha iombonan’ny rehetra ny ady amin’ny kolikoly ary mitaky ny fandraisan’andraikitry ny tsirairay raha tian-ko tratra ny tanjona. Tsara ity fanaovan-tsonia ny fifanarahana ity, saingy ilaina ny tena fampiharana azy araka ny tokony ho izy. Endriky ny finiavana avy any amin’ny sehatra tsy miankina hiadiana amin’ny kolikoly ny nasehon’ny Fid”.Hanampy ny Fid hametraka ny CAC ny Bianco ary hanohana amin’ny fanabeazana sy ny fanentanana ny daholobe hiadiana amin’ny kolikoly. Hiandraikitra ny fitiliana sy ny famantarana ny sehatra mety ahitana na hiteraka kolikoly koa izy, sady handroso soso-kevitra sy vahaolana.Njaka A.L’article Bianco-Fid: fiaraha-miasa hiadiana amin’ny kolikoly a été récupéré chez Newsmada.
MCC sy Africa50: miara-miasa ho an’ny fotodrafitrasa aty Afrika
Nanao sonia fiaraha-miasa ny Millenium Challenge Corporation (MCC) sy Africa50, mikendry ny fampiasam-bola hisy fiantraikany malaky aty Afrika (Millenium impact for infrastructure accelerator na MIIA), azo refesina eo amin’ny lafiny sosialy sy toekarena. Ny fampiasam-bola avy amin’ny alalan’ny MIIA, mikasika indrindra ny tetikasa momba ny rano, ny fidiovana, ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fitaterana, ny herinaratra, ny fifandraisan-davitra. « Ny MCC sy ny Africa 50, miaraka manaporofo mandray andraikitra manentana amin’ny fampiasam-bola ho an’ny tetikasa misy akony lehibe aty Afrika », hoy ny tale jeneralin’ny MCC, i Sean Cairncross. « Fiaraha-miasa hahafahana mampahazo vahana ny toekarena aty Afrika ».« Faly kosa izahay miara-miasa amin’ny MCC, mamolavola sy mampihatra ny MIIA. Manamora ny asanay izany amin’izay tetikasa rehetra mila vola aty Afrika, hisy fiantraikany eo amin’ny fampandrosoana. Hatao hanampy amin’ny fotodrafitrasa, iray lehibe amin’ny asanay », hoy kosa ny tale jeneralin’ny Africa50, Alain Ebobisse. Misy amina miliara dolara maro hatramin’ny 2035, ny tinady eran-tany amin’ny fotodrafitrasa (3,7 billions de dollars). Ny 2/3 amin’izany tokony ho an’ny tany an-dalam-pandrosoana. Ny banky afrikanina momba ny fampandrosoana (BAD) manombana 130 hatramin’ny 170 miliara dolara isan-taona aty Afrika.Avy amin’ny fananan’ny roa tonta traikefa ny hanaovana ny MIIA aty Afrika, mitarika ireo mpampiasa vola sy mampisy tetikasa . Mahafantatra tsara momba an’i Afrika ny Africa50, manamarina izao fiaraha-miombon’antoka izao, mitovy araka ny efa fampiharana ny MIIA any Azia, Amerika Atsimo, Eoropa Atsinanana. Famatsiam-bola avy amin’ny MCC ho an’ny tetikasa maro iadiana amin’ny fahantrana. Sampana iray mahaleotena ao amin’ny governemanta miasa maneran-tany , indrindra amin’ny tany mahantra vatsina vola ho an’ny sehatry toekarena.R.MathieuL’article MCC sy Africa50: miara-miasa ho an’ny fotodrafitrasa aty Afrika a été récupéré chez Newsmada.